हाल विश्वभरी फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लागेको रोगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) कोभिड–१९ को नाम दिएको छ । डब्लुएचओले यसलाई विश्वव्यापी महामारीको रुपमा घोषणा गरिसकिएको छ । कोरोना भाइरस श्वास
काठमाडौं । चीन, इटली, इरान लगायतका देशहरुमा फैलिएको कोरोना भाइसरसको संक्रमण अहिले विश्वव्यापी जस्तै बनिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई पनि उच्च जोखिम क्षेत्र मानेको छ । यदि नेपालमा
बाल्टिमोर । विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसको कारण अमेरिका पनि आक्रन्त छ । शुक्रबारदेखि राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गरिएको अमेरिकामा समेत ३४ सय माथिका विरामी भेटिएका छन् भने यो आलेख तयार
प्रायः कम महत्वमा पर्ने तर अति नै संवेदनशील अंग हो छाला । मानव शरीरको प्रत्यक्ष सौन्दर्यतासँग जोडिएकाले पनि यसको हेरचाह वैज्ञानिक तरिकाले गरिनु अपरिहार्य छ । के हो छाला ?
हाल देशमा सञ्चालित बैैंक तथा वित्तीय संस्थामा बजार प्रतिस्पर्धा धेरै बढेर गएको छ । उक्त संस्थामा कार्यरत कर्मचारी खासगरी शाखा प्रवन्धक तथा ग्राहक सम्पर्क व्यवस्थापकलाई छिटोभन्दा छिटो कर्जा तथा निक्षेपका
काठमाडौं । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले हजारौंको ज्यान लिइसकेको छ । विश्वका झन्डै ६० देशमा कोरोनाको संक्रमण फैलिसकेको छ । अहिलेसम्म कोरोना भाइसल लागेको बिरामीको उपचार प्रभावकारी देखिएको छैन ।
क्यानेडियन ई–कमर्स कम्पनी सपिफाइका संस्थापक तथा सीइओ तथा फोब्र्सका अनुसार अर्बपति टोबायस लुट्काले व्यवसायमा सफलता पाउनका लागि आफ्नो सक्सेस मन्त्र सेयर गरेका छन् । ३.८ बिलियन अमेरिकी डलरका मालिक लुट्का
काठमाडौं । जीवन बीमा अति नै महत्वपूर्ण विषय हो । सामान्यतया जीवन बीमा मरेपछि पैसा पाइने गतिविधिका रुपमा लिइन्छ । तर बीवन बीमाको यथार्थ फरक छ । जीवन बीमा बाँचुञ्जेलका
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले सेयर लगानीकर्ताहरुलाई केही टिप्स दिएका छन् । उनले क्लिकमाण्डूसँगको कुराकानीमा लगानीकर्तालाई टिप्स दिएका छन् । बोर्डले अध्यक्ष पाएसँगै लगानीकर्ताले धेरै नै
काठमाडौं । तपाईं लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? छ भने तपाईंका लागि यो टिप्स अति नै उपयोगी हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लामो समय अर्थ मन्त्रालयको
उद्योगमा लिएको नीति ठीक भएपनि देउवा सरकारका कतिपय कार्यक्रम ओली प्रवृत्तिकै छन्ः रामेश्वर खनालको अन्तर्वार्ता
काठमाडौं । इसेवा मनि ट्रान्स्फरले दशैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै ‘चाड पर्वको बहार,